Waa maxay FTP/SFTP? Hagaha Isticmaalayaasha WordPress | BehMaster
Bogga ugu weyn/WordPress/Waa maxay FTP/SFTP? Hagaha Isticmaalayaasha WordPress
Waa maxay FTP/SFTP? Hagaha Isticmaalayaasha WordPress
WordPress waa isticmaale-saaxiibtinimo kuwa aan lahayn khibrad farsamo oo badan, gaar ahaan iyadoo laga caawinayo plugins saxda ah. Taasi waxay tidhi, waxaa jira hawlo qaar oo plugins-yadu aysan had iyo jeer ku caawin karin, sida cilad-bixinta khaladaadka ama hirgelinta isbeddello horumarsan.
Xaaladahan, waxa ay ku caawin kartaa in la fahmo Hab-maamuuska Wareejinta Faylka (FTP) iyo Habka Wareejinta Faylka Sugan (SFTP). Kuwani waxay awood kuu siin doonaan inaad si toos ah u gasho oo aad ula falgasho faylalka boggaaga si aad u samayso isbeddello iyo wax ku darid.
Maqaalkan, waxaan ku sharixi doonaa aasaaska FTP iyo SFTP waxaanan ka doodi doonaa sababta ay faa'iido u yeelan karaan. Ka dib waxaan ku bari doonaa sida loo fuliyo saddex isticmaalka caadiga ah ee tignoolajiyadan, adigoo isticmaalaya qaabka WebFTP macaamiisha DreamHost. Aan bilowno!
Fahamka FTP iyo SFTP (iyo goorta la isticmaalayo)
FTP waa hab toos ah oo loo wada xidhiidho oo leh server fog, sida midka martigelinaya boggaga WordPress. Guud ahaan waxa loo istcimaalaa in lagu maareeyo faylasha ku kaydsan serfarkaas. Tani waa muhiim sababtoo ah qaar ka mid ah hawlaha maareynta faylka laguma fulin karo dhammaadka dambe ee WordPress.
Cida u liidata isticmaalka FTP waa in aanay qasab ku ahayn in xisaabta lagu daro khataraha amniga internetka. SFTP, nooca aad u horumarsan Tiknoolajiyada la mid ah, waxay awood kuu siinaysaa inaad u maamusho faylasha server-kaaga si la mid ah FTP. Si kastaba ha ahaatee, waxay isticmaashaa qalab hore loo sameeyay Isku xirka Shell ee sugan (SSH). si loo ilaaliyo badbaadada faylashaada iyo goobta guud ahaan.
Waxaa jira dhowr hawlood oo FTP iyo SFTP ay faa'iido u leeyihiin, oo ay ku jiraan galitaanka faylka badan, ku rakibida gacanta ku dhejinta plugins iyo mawduucyada, tafatirka faylasha, xallinta arrimaha ku habboon, iyo beddelidda oggolaanshaha faylka. Iyadoo aan si toos ah loo helin faylasha goobtaada, hawlahani waxay noqonayaan kuwo aad u adag, ama xaaladaha qaarkood, aan macquul ahayn.
Hordhac ku saabsan WebFTP
Si aad ugu xidho serfarka goobtaada oo aad u maamusho faylashaada, waxaad u baahan doontaa macmiil FTP ah. Caadi ahaan, ereyga 'Climiilka FTP' ayaa la adeegsadaa haddii aad ka gelayso goobta FTP ama SFTP. Waxaa jira noocyo kala duwan macaamiisha FTP-da saddexaad diyaar u ah soo dejinta, laakiin haddii aad nasiib leedahay, martigeliyahaaga mareegaha ayaa ku siin doona mid.
Macaamiisha DreamHost, waxaan u leenahay macmiil FTP ah: WebFTP. Waxay awood kuu siinaysaa inaad si dhakhso ah ugu xidhid serverkaaga, adigoon dhib u gelin inaad gasho macmiil qolo saddexaad. Kadib, waxaad si hufan u maareyn kartaa faylashaada adigoo isticmaalaya nidaam hagitaan fudud.
WebFTP waxay diyaar u tahay macmiil kasta oo DreamHost leh goob si buuxda loo martigaliyay, oo ay ku jiraan kuwa isticmaalaya DreamPress, our adeegga martigelinta WordPress ee la maareeyay. Haddii taasi ay ku jirto, markaas waxaad awoodi doontaa inaad isla markiiba bilowdo isticmaalkeeda!
Wax badan ka hel DreamPress
DreamPress Plus iyo isticmaalayaasha Pro waxay marin u helaan Jetpack Professional (iyo 200+ mawduucyo qaali ah) iyadoon wax kharash ah lagu darin!
3 Hawlood oo Muhiim ah oo aad ku dhammaystiri karto Adeegsiga WebFTP
Waxaa muhiim ah in la ogaado in mar kasta oo aad isticmaasho FTP ama SFTP, halkaas is qaar ka mid ah khatarta ku lug leh. Qaladaadka si fudud ayaa loo samayn karaa, iyo isbeddelada qaar ayaa si aan kasoo noqosho lahayn u dhaawici kara goobtaada. Kahor intaadan bilaabin inaad ku maamusho faylashaada FTP ama SFTP, sidaa darteed, waxaad rabi doontaa ku celi goobtaada waaba haddii. Habkaas, waxaad dib u soo celin kartaa haddii ay wax qaldamaan.
Haddii aad tahay isticmaale DreamPress, markaa si fudud ayaad u nasan kartaa! Waxaan si toos ah kuugu kaydinay shabakadaada maalin kasta. Waxaa dheer, macaamiisha DreamPress hadda way awoodaan Samee kaydiyado marka la rabo iyada oo loo marayo guddigooda xakamaynta.
Ilaa iyo inta aad qaadato taxadarka saxda ah, FTP iyo SFTP waxay hagaajin karaan goobtaada iyagoo awood kuu siinaya inaad u maamusho faylasha siyaabo aan laga heli karin gudaha WordPress dhabarka dambe. Iyada oo aan la sii dheerayn, aan eegno qaar ka mid ah hawlaha muhiimka ah ee aad ku dhammaystiri karto adigoo isticmaalaya WebFTP si aad u gasho server-ka boggaaga.
1. Soo rar faylasha goobtaada
Mid ka mid ah isticmaalka FTP/SFTP waa in gacanta ku rakib WordPress on server-ka martidaada. Tan waxaad ku samayn kartaa soo dejinta WordPress, bilaabista xidhiidhka WebFTP, ka dibna ku dhejinta faylasha WordPress ee serverkaaga. Adigoo isticmaalaya hab la mid ah, waxaad sidoo kale ku rakibi kartaa plugins iyo mawduucyada gacanta.
Xusuusin: Haddii aad tahay macmiil DreamHost, waxaad yeelan doontaa a hal-guji ikhtiyaarka rakibida WordPress. Tani waxay ka dhigan tahay inaad ku kicin karto goobtaada oo ku socon karto dhowr daqiiqo gudahood - looma baahna FTP/SFTP. Waxaan kugula talineynaa rakibaadda hal-guji macaamiisheena; waxay fududaynaysaa samaynta goobta waxayna noo ogolanaysaa inaanu si toos ah u cusboonaysiinno software-kaaga WordPress marka nooc cusubi soo baxo.
Maadaama WordPress uu leeyahay cabbirka faylka ugu badan ee la geliyo, way adkaan kartaa in lagu daro faylal aad u waaweyn goobtaada iyada oo loo marayo interface admin. Waxa kale oo ay kaa ilaalinaysaa in aad bulk ku shubto tiro badan oo faylal ah hal mar, taas oo macnaheedu noqon karo in aad hal mar hal mar geliso. Haddii aad rabto inaad geliso faylal waaweyn ama aad wakhti badbaadiso adigoo ku daraya dhowr fayl hal mar, waxaad u baahan doontaa inaad isticmaasho FTP/SFTP.
Si aad faylasha ugu dhejiso goobtaada, ku bilow inaad gasho Koontadaada DreamHost. Kadib, laga bilaabo domains liiska hoos-u-dhaca ee dhinaca bar-side, dooro Maamul Domains.
Hoosta domain kasta waxaad ku leedahay kaas oo si buuxda u martigeliyay DreamHost, waxaad arki doontaa a WebFTP doorasho, kaas oo aad gujin karto si aad u bilowdo macmiilkayaga FTP.
Marka xigta, si fudud u dooro summada soo dejinta ee ku dhex taal bar-barta hoose. Daaqada ayaa soo bixi doonta oo awood kuu siin doonta inaad doorato faylasha aad soo rogto.
Haddii aad ku rakibayso WordPress, halkan waa meesha aad ka dooran lahayd faylasha WordPress ee aad soo dejisay. Hadii aad tahay ku rakibida qiimo jaban plugin ama mawduuca, waxaad gali kartaa galkeeda plugin ama hagaha mawduuca ee ku dhex jira Conciliation content faylka.
Sida faylalka warbaahinta, waxaad ku bilaabi kartaa adigoo ku daraya Uploads diiwaanka Conciliation content. Kadib, waxaad u baahan doontaa inaad ku diiwaan geliso plugin sida Kudar Server-ka si aad uga gasho Maktabadaada Warbaahinta.
Relacionado: Tutorial: Sida Loo Rakibo Mawduuca WordPress
2. Edit WordPress Files
Mararka qaarkood habka ugu wanaagsan ee loo habayn karo walxaha mawduucyada qaarkood iyo goobaha horumarsan waa adiga oo si toos ah u tafatiraya faylasha serverkaaga. Waxaa muhiim ah in la ogaado, marka laga reebo dhowr, laguma talinayo in wax laga beddelo faylasha asaasiga ah ee WordPress.
Mid ka reeban ayaa ah ka wp-config file, Kaas oo kaydiya macluumaadka ku saabsan kaydka xogta ee goobtaada. Waxaad tafatir kartaa faylkan si aad u damiso cusboonaysiinta tooska ah, u bedesho horgalaha xogtaada, oo aad u qabato hawlo kale oo horumarsan.
Si aad u saxdo faylka goobtaada, ka dooro liiska WebFTP, oo guji Edit si loo furo interface editor.
Halkan, waxaad awoodi doontaa inaad ku sameyso wax ka bedel kasta oo lagama maarmaanka ah faylka. Haddii aad rabto inaad wax ka beddesho mawduucaaga, waxaad u baahan doontaa inaad wax ka beddesho style.css faylka, kaas oo ku yaal hagaha mawduucaaga ee ku yaal Conciliation content faylka.
Dhaqanka caadiga ah waa in lagu qoro wax kasta oo aad ku beddesho faylalkaaga marka aad samaynayso tafatir kasta. Sidan, haddii khaladaadku dhacaan ka dib markaad dhammayso tafatirka, waxaad si dhakhso ah u raadin kartaa khaladaadka isbeddelka aad samaysay.
Marka aad dhammayso tafatirka, dhagsii Save si loo hirgaliyo isbedeladaada. Kadib, waxaad ka eegi kartaa goobtaada dhanka hore si aad u hubiso inay guulaysteen.
3. Beddel Ogolaanshaha Faylka
Oggolaanshaha faylka ayaa go'aamiya cidda geli karta oo wax ka beddeli karta faylal iyo faylal gaar ah oo ku yaal boggaaga. Haddii ay jiraan wax ka badan hal qof oo marin u leh boggaaga dhabarka dambe, waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad xaddido oggolaanshaha isticmaaleyaasha gaarka ah, si aad u hubiso in walxaha xasaasiga ah aan la faragelin.
Beddelidda oggolaanshaha faylka sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa in lagu xalliyo khaladaadka WordPress qaarkood, oo ay ku jiraan "403 Mamnuuc - Gelitaanka waa la diiday" baadi. Dhibaatadan waxaa sababi kara faylal kharriban ama pluginsyada amniga si liidata loo habeeyey, waxayna kuu diidaysaa inaad gasho bogag gaar ah (mararka qaarkood xitaa waxaa ku jira boggaaga wp-admin).
Si aad u bedesho ogolaanshaha faylka WebFTP, dooro faylka aad rabto in aad saameyn ku yeelato oo guji CHMOD, ama isticmaal astaanta furaha ee ku taal bar-barta hoose.
Daaqada soo baxday ee soo baxday, waxaad bedeli kartaa ogolaanshaha faylka ee noocyada kala duwan ee isticmaalayaasha adigoo dooranaya oo ka saaraya sanduuqyada.
Guud ahaan, xeeladda ugu fiican ayaa ah in la siiyo isticmaale kasta kaliya oggolaanshaha ugu yar ee ay u baahan yihiin si ay shaqadooda u qabsadaan. Mulkiilaha ahaan, dabcan, waxaad u baahan doontaa inaad haysato oggolaanshaha ugu badan ee naftaada. Markaad dhammayso inaad isbedel ku samayso halkan, dhagsii OK si aad u kaydsato goobaha ogolaanshahaaga.
Fayl garee kan Away
FTP iyo SFTP waxay u ekaan karaan cabsi dusha sare leh, laakiin marka aad bilowdo isticmaalkooda, waxaad ka heli doontaa inay noqdaan qalab ku anfacaya helitaanka goobtaada WordPress qaab sare. WebFTP-keena cusub sifada macaamiisha DreamHost waxay ka dhigtaa habka xitaa mid sahlan iyadoo si sahlan loo hagi karo si loo dhammeeyo dhammaan hawlaha ugu badan ee la xiriira faylka.
Ma qabtaa wax su'aalo ah oo ku saabsan FTP, SFTP, ama WebFTP? Ku biir DreamHost Community oo aan ka doodno!
Dib u eegis Foomka WS: Foom Xoog leh oo Dabacsan
Sida loogu guuleysto Tartamada Waxqabadka Apple Watch mar kasta